Kwesịrị ka ndị otu UNWTO nye tiketi na Marrakesh ugbu a? Ọ dịghị !!!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Kwesịrị ka ndị otu UNWTO nye tiketi na Marrakesh ugbu a? Ọ dịghị !!!
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
UNWTO na ndị minista na -ahụ maka njem nlegharị anya sitere na mba karịrị 100 na -aga n'ihu ịzụta tiketi maka ịga nzukọ ọgbakọ nke iri abụọ na anọ nke World Tourism Organisation.
Dabere na ozi enwetara site na nchịkwa UNWTO ọ nweghị tiketi ga -adị mkpa, belụsọ ezigbo kọmpụta na njikọ ịntanetị iji gaa mmemme ahụ.
The Nzukọ ọgbakọ nke iri abụọ na anọ nke World Tourism Organisation (UNWTO) nke a ga -eme site na Nọvemba 30 ruo Disemba 3 na Marakesh, Morocco.
eTurboNews buru amụma na a ga -eyigharị ọgbakọ ọgbakọ n'ọnwa Julaị. Naanị mbido ọnwa a amụma a ghọrọ eziokwu mgbe UNWTO mere ọkwa ụbọchị ọhụrụ.
Isi mmalite na -eme njem n'ime World Tourism Organisation na -egosi ugbu a na atụmatụ dị iche nwere ike na -eme.
Ọbụnadị ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi na Morocco ka gọọmentị na -adọ aka na ntị, gụnyere United States ka ha zere ime njem na ala Morocco n'ihi mmụba na ụdị Delta na -efe efe nke coronavirus.
Usoro ahụike na Morocco akwadoghị ịgwọ mmụba ọzọ na ikpe COVID-19, na ijide General Assembly na mba North Africa a nwere ike bụrụ ndị nnọchi anya ihe egwu sitere n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 160 achọghị iwere.
Nkwadebe maka mmemme a dị mkpa ka na -aga n'ihu, mana isi mmalite sitere na isi ụlọ ọrụ UNWTO dị na Madrid gbara ama eTurboNews a na -akwado nkwadebe maka ọgbakọ ọgbakọ izizi mebere n'oge a.
Enwere ike ịtụ anya na a gaghị ekwupụta ụdị mgbanwe a ruo nkeji ikpeazụ ma enwere ike nwee ebumnuche aghụghọ nke onye odeakwụkwọ UNWTO nwere. eTurboNews na -eme nyocha ugbu a.
Dị ka mgbe niile, eTurboNews nwara inweta nkwenye ozugbo na UNWTO.
Ọ bụ ihe nwute, onye njikwa nkwukọrịta UNWTO Marcelo Risi ghọrọ onye otu nzukọ egwu, iyi egwu, na nrụgide na -eme, na ịgwa ndị ọzọ okwu bụ akụkụ nke ihe a. onye nduzi nkwukọrịta na -adịghị ekwe ime.
Brazil nwere ọcụ na nzukọ na Expo Dubai 2020
Naanị ndị ọbịa mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi ọrịa ka a ga -ahapụ ...
A hụrụ ozu ndị njem Russia anọ na ụlọ nkwari akụ Albanian ...
Direct ụgbọ elu si Nur-Sultan na London Heathrow ...
Enweghị radar? Nsogbu adịghị! Ọdụ ụgbọ elu Kabul emepegharịrị maka ...
Ọdụ ụgbọ elu Hawaii a ma ama na -agbazinye mgbazinye ụgbọ ala ...
US gbasaa mmechi nke ala ala na Canada na ...
ComPsych's 2021 Health @Work Award na -aga…
Derailed n'ehihie Satọde mara mma pụtara ihe mgbu ...
Akwụkwọ na njem na ntụkwasị obi na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Ejila 'ihe nkpuchi na -ezighi ezi' na Eurostar ...
Ụgbọ elu Canada na India na Air Canada ugbu a
India - Njem nlegharị anya na njem Kazakhstan: Gịnị bụ ...
Turkey agaghị etinye mmachi na ndị njem Russia
Ejikọtara Ike Njem Ọhụrụ Na -eme njem nlegharị anya
Na-akwalite igodo njem maka ókèala US na Canada ...
IATA: Ibu ụgbọ elu ụwa na -achọ uto karịa ike
Ego ijeri $ 90 dị ọnụ ala: ụzọ ụgbọ oloko na -akwa French ...
Maldives Rich Cultural Heritage na -eti mkpu ...
Cote d'Ivoire kwuputara ikpe Ebola mbụ na 25 ...
Onye isi nchịkwa na -apụ dị ka Mekong World Tourism Day ...
Thailand, Njem nlegharị anya na mpaghara gbara ọchịchịrị: Ọ bụghị ozi ọma
Ndị ọbịa na -eche mmachi njem ọhụụ maka Hawaii
Ebe ikpe COVID-19 ọhụrụ gbadara, Bali nwere ike ịmaliteghachi na…
New Djibouti Sheraton na Kempinski na asọmpi ...
Trazụ ahịa mmadụ bụ Mpụ zuru ụwa ọnụ